यस्तो ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छन असिमित धन, कतै तपाई त पर्नुभएन ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/यस्तो ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छन असिमित धन, कतै तपाई त पर्नुभएन ?
यस्तो ४ ठाउँमा कोठी हुने महिला पुरुषसँग थुप्रिन्छन असिमित धन, कतै तपाई त पर्नुभएन ?
हाम्रो शरीरको विभिन्न स्थानमा दाग तथा कोठीहरु हुन्छन् । के ति कोठीहरुले कुनै शुभ वा अशुभ फल प्रदान गर्दछ रु यस सम्बन्धमा मसुन्द्र शास्त्रमा शरीरमा भएको कोठी वा चिन्हका आधारमा व्यक्तिको भाग्य र भविष्य विश्लेषण गरिएको छ ।
हातमा पाइने कोठी, नाकमा पाईने कोठी, चिउँडोको भागमा कोठी, ढाडमा पाउने कोठी
कम्मरमा कोठी हुने रोगी हुन्छन् । पेटमा कोठी हुनेहरु खानाका पारखी हुन्छन् । दाहिने हत्केलामा कोठी हुनेहरु बलबान हुन्छन्। बायाँ हत्केलामा कोठी हुनेहरु खर्चालु हुन्छन् । दायाँ खुट्टामा कोठी हुनेहरु बुद्धिमान हुन्छन् भने बायाँ खुट्टामा कोठी हुनेहरु खर्चालु हुन्छन् ।
तुरुन्त १० किलोसम्म तौल घटाउन अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय !